XOG RASMI AH: Farmaajo iyo Kheyre oo Isku raacay weerar cusub oo lagu qaadayo Isbaheysiga Muqdisho, Puntland & Jubbaland, Yaa fulinaya? | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG RASMI AH: Farmaajo iyo Kheyre oo Isku raacay weerar cusub oo...
XOG RASMI AH: Farmaajo iyo Kheyre oo Isku raacay weerar cusub oo lagu qaadayo Isbaheysiga Muqdisho, Puntland & Jubbaland, Yaa fulinaya?
MUQDISHO(SMC) – Warsidaha Puntlandtimes oo ah Warside madax banaan ayaa helay macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan wada hadal gaar ah dhexmaray Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra`iisulwasaaraha Xukuumadda Faderaalka, kaas oo looga hadlayo arrimaha siyaasadda ee qalafsan waqtigana ka taagan gudaha Soomaaliya.
Warsidaha PuntlandTimes, wuxuu ogaaday in ay shirkaas ka qeybgaleen wasiiro katirsan Xukuumadda Faderaalka, Lataliyaasha Siyaasadda iyo sharciga ee Madaxweynaha, waxaana qodobada laga wada hadlay ay ahaayeen.
Jubbaland & Puntland sidii ay ugu yeelan lahaayeen saameyn toos ah oo kuwajahan arrimaha Siyaasadda, gaar ahaana sidii loo qaadi lahaa beegsi xoog leh oo kuwajahan qadiyadaha ay isku hayaan dhinacyadan, iyadoo kulankan ay ka qeybgaleen shaqsiyaad katirsan Golaha baarlamaanka oo kasoo jeeda deegaanada Puntland iyo Federaalka.
Sida loo burburin lahaa loogana hortagi lahaa iskaashiga ama Isbaheysiga siyaasadeed ee xiligan dhexmaray Xassan Sheekh Maxamuud, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Shariif Sheekh Axmed iyo Xisbiyada mucaaradka kuwooda ugu waa weyn.
In la helo qorshaha Doorashada oo loo gudbiyo beesha Caalamka ka hor dhamaadka bisha November, ayna sidaas oo kale xooga saran qadiyadaha ku wajahan siyaasad adag.
Dhismaha Galmudug oo Madaxweyne Xaaf lasiinayo doorkiisa, isla markaasna uu soo magacaabo guddiga rasmiga ah ee xalinta Khilaafka oo ay taladiisa leedahay dawladda Soomaaliya.
Afarta qodob ayay ogaatay Puntlandtimes.com in ay gundhig u ahaayeen kulankii xalay, waxaana kulan ka dib lagu balamay in markale ay dhinacyadu is arkeen bartamaha bisha October, iyadoo ay jireen waxyaabo la kala qaatay.
Puntland & Jubbaland ayaa laga wajahayaa dhinacyo kala duwan oo ay ku jiraan lacago badan loo dirayo qaar kamid ah mucaaradyada kusugan gudaha deegaanadaas, sidaas oo kale abaabul cusub ayay DFS ka bilaabaysaa gobalka Gedo.
Halka Puntland la bilaabi doono qorshaha Abaabulida dhalinyaradda iyo Banaanbaxyo kadhaca deegaanada ka durugsan laamiyada oo aysan inta badan gaarin gacanta dawladda iyo mashaariicda ay fuliyaan Hay’addaha caalamiga ah.
Sidaas oo kale mudane katirsan baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya oo laga soo doortay Puntland ayaa todobaadka soo socda ku wajahan Puntland, isagoo abaabulkaas qeybtiisa ka qaadanaya, waxaana uu yahay shaqsiga markan lagu aaminay howlaha dawladda Faderaalka ee kuwajahan maamulka 22 sano jirsaday.
Previous articleIlhan Cumar oo Jabuuti kula kulantay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle (Sawirro)
Next articleDHAGEYSO:Soomaali ku dhibaataysan dalka Libiya.